Umshado wezitabane uwina e-US kanti uTim Cook uwugubha | Ngivela kwa-mac
Umshado wezitabane uphumelela e-US kanti uTim Cook uyawugubha
Namuhla wusuku olukhulu kuTim Cook futhi ngaphezu kokuzuza impumelelo emhlabeni womsebenzi, ukwazile nokufakaza ukuthi iMelika ekugcineni iyisebenzisa kanjani Umshado wezitabane kuwo wonke amazwe aseNyunyana. Lolu shintsho lwenziwe kusukela ngoLwesihlanu olwedlule, ngosuku olufanayo lapho i-Apple Watch yathengiswa khona emazweni amasha.
Lezi zindaba zithandwa kakhulu ezinkundleni zokuxhumana impelasonto yonke futhi ngukuthi amalungelo alinganayo ekugcineni asetshenzisiwe emshadweni phakathi kwabantu bobulili obufanayo. Lonke lolu shintsho luhambisana nezinsuku lapho i-Apple igubha Ukuziqhenya kwendabuko lapho iba khona kakhulu.
UTim Cook akakaze afike isikhathi eside futhi ubegubha ku-akhawunti yakhe ye-Twitter. Akasifihli isimo sakhe sobungqingili futhi ukhuluma ngendaba yokulingana, uthando nokubekezela. Uma sibheka emuva futhi sikhumbula othandekayo wethu uSteve Jobs, singakhumbula ukuthi kanjani esikhangisweni Kwabahlanyayo kwethulwe isiqubulo esisindile kuze kube namuhla:
Abantu abahlanya ngokwanele ukuthi bacabange ukuthi bangaguqula umhlaba yibo abakwenzayo.
Yebo, lesi yisisho uTim Cook, umngani osondelene naye kaSteve Jobs, agubhe lezi zindaba esikhuluma ngazo ku-akhawunti yakhe ye-Twitter. Njengoba kungenzeka usuvele uyazi, uTim Cook wenza umphakathi ubungqingili bakhe ngo-Okthoba odlule futhi usho ukuthi uyaziqhenya ngokuba gay nokuthi ukubheka njengesinye sezipho ezinkulu uNkulunkulu amnike zona.
Indlela ephelele ye-athikili: Ngivela kwa-mac » Apple » Izaziso » Umshado wezitabane uphumelela e-US kanti uTim Cook uyawugubha
Ungazilungisa kanjani izithonjana ezingekho ngemuva kwe-jailbreaking iOS 8.3
Kusasa uqala ukusakaza kwakhe iBeats 1 futhi uzoxoxisana no-Eminem